Home › What's New › Press Release (12 September, 2018)
Press Release (12 September, 2018)
1. The Embassy of India and the Rakhine State Government entered into two separate agreements today to facilitate capacity building and economic development in Rakhine State. The Ministry of Agriculture, Livestock, Forestry and Minerals signedaMoU with the Embassy of India that will enable the latter to supply 15 tractors and 15 crawler harvesters to the State Government, meeting therebyakey need expressed by the Peasants Union in the State.
2. The Department of Social Affairs of the State Government, meanwhile, signedaseparate MoU that will enable the Embassy of India to provide 40 computers and their associated peripherals to the Sittwe Computer University.
3.The MoUs were signed by U Kyaw Lwin, Hon'ble Minister for Agriculture,Livestock, Forestry and Minerals (Rakhine State Government) and Dr. Chan Thar, Hon'ble Minister for Department of Social Affairs, on behalf of their respective Ministries and H.E. Shri Vikram Misri, Ambassador of India to Myanmar on behalf of Embassy of India, Yangon, in the august presence of Hon'ble Chief Minister of Rakhine State, U Nyi Pu. Cabinet Ministers from Rakhine State Government, Principal and Teachers from Sittwe Computer University, Peasant Union members and prominant civil society members from Rakhine State were also present on the occasion.
4. The objective of providing the assistance is to promote agricultural mechanization in Rakhine State and also to promote computer literacy among Rakhine State youth, which will prepare them for employment opportunity in software sector.
5. The Government of India is committed toastrong development assistance partnership with the Government of the Republic of the Union of Myanmar. Recognizing the special challenges in and needs of Rakhine State, where equitable development of all sections of the State's inhabitants is key to building social harmony, peace and prosperity, India and Myanmar have separately entered into an agreement on the Rakhine State Development Programme, under which India is providing US$ 25 million in grant assistance overaperiod of five years. This assistance is dedicated to projects in Rakhine State, the first of which isapilot project to build 250 prefabricated houses in Northern Rakhine for displaced members of the Rakhine Buddhist, Hindu and Muslim communities.
6. The two countries are cooperating closely to develop more projects that can be executed under the aegis of Rakhine State Development Programme.
၁၂ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၈
၁။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၏စီးပွားရေး တိုးတက်စေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ရန်တို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ယနေ့တွင်သဘောတူညီချက်၂ ရပ် ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊သစ်တောနှင့်သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် အိန္ဒိယနိုင် ငံသံရုံးတို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တောင်သူလယ်သမားများသမဂ္ဂ၏အဓိကလိုအပ်ချက်အဖြစ်ဖော်ပြ သော လယ်ထွန်စက် (၁၅) စီးနှင့် သီးနှံအမြန်ရိတ်သိမ်းယာဉ် (၁၅) စီးတို့အား အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးမှ ပံ့ပိုး ပေးအပ်မည့်နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
၂။ထို့အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်၊လူမူရေးဝန်ကြီးဌာနသည်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးနှင့်သီးခြားနားလည်မှုစာ ချွန်လွှာတစ်ခုအားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ထိုနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးမှ စစ်တွေ ကွန်ပြူ တာတက္ကသိုလ်သို့ကွန်ပြူတာအလုံး ၄၀ နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေးအပ်မည်ဖြစ် သည်။
၃။အဆိုပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာများအား လေးစားရပါသော ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု၏ ရှေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့်သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးကျော်လွင်နှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဒေါက်တာ ချမ်းသာတို့မှသက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ကိုယ်စားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Shri Vikram Misri မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံး၊ရန်ကုန်မြို့၏ကိုယ်စားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ထိုလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊စစ်တွေ ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်ဆရာများ၊ တောင်သူလယ်သမားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှထင်ရှားသောလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များမှပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
၄။ဤကဲ့သို့အကူအညီများပေးအပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲကဏ္ဍတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်စေရန် ရခိုင်ပြည် နယ်ရှိ လူငယ်များအား ကွန်ပြူတာနည်းပညာတတ်မြောက်မှုမြှင့်တင်ပေးရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။
၅။အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ ထက်သန်စွာပေးအပ်ရန်သန္နိဌာန်ချမှတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အထူးစိန်ခေါ်ချက်များရှိနေခြင်းအား သတိပြုမိလျှက်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်လျှက်ရှိသူများ၏ လူမှုရေး သဟဇာတဖြစ်မှု၊ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးတို့ပေါ်ပေါက်လာရန်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဟန်ချက်ညီစွာဖွံ့ ဖြိုးရေးသည် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အစီအစဉ်အရ (၅)နှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅)သန်းအားကူညီထောက်ပံ့ပေးရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် သီးခြားသဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ ဤဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအရ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်နှင့်အညီ ၎င်း၏ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအဖြစ် အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အိမ်အလုံး (၂၅၀)ကို ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဘာသာအသီးသီးမှ နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့ကြရသော သူများအတွက်ပထမဆုံးတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။
၆။ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် နောက်ထပ်စီမံကိန်းများစွာအားနှစ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။